“Stand with Standing Rock”: Mpanao Fihetsiketsehana Manohitra ny Dakota Access Pipeline · Global Voices teny Malagasy
“Stand with Standing Rock”: Mpanao Fihetsiketsehana Manohitra ny Dakota Access Pipeline
Voadika ny 01 Novambra 2016 17:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Ελληνικά, Español, English
Efa am-bolana izao ny Sioux Lakotas no nifamory hibahana ny fitsabahan'ny Dakota Access Pipeline amin'ny taniny. Milaza tena ho “Mpiaro ny rano” izy ireo, satria hampidi-doza ny rano azo sotroina ao amin'ny Valan-javaboarin'i Standing Rock, ao Dakota Avaratra ny fananganana fantsona goavana ao.
Nanatevin-daharana ny Lakotas ireo Fokom-Pirenena mihoatra ny 200 tonga voalohany, sy ireo mpikatroka manerana izao tontolo izao. Naaton'ny Fitondrana Obama vonjimaika ny fananganana ny fantsona goavana taorian'ny fandravana toera-masina Sioux tamin'ny septambra 2016.
Saingy nandravarava ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny Dakota Access Pipeline ny polisy misahana ny rotaka tamin'ny 27 oktobra, tamin'ny fanamarinan-tena fa nitoby tamin'ny tany an'olon-tsotra ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny voalohany io fantsona lehibe io dia nokasaina handalo eo anilan'i Bismarck, ao Dakota Avaratra, saingy navily lalana mba hanavatsava ny tanin'ny vazimba teratany Lakotas. Ity sombin'ny lahatsary fanadihadiana momba ireo vehivavin'i Standing Rock ity no hamehy ny fifaningoran-tombontsoa tafiditra amin'ity raharaha ity. “Mbola mitolona amin'ity tolona efa nanomboka tamin'ny taonjato faha-18 ity hatrany izahay hatramin'izao fotoana izao”, hoy ny iray amin'ireo olona nanaovana antsafa.
Mbola tsy nanana hery tahaka izao izahay talohan'ny fisian'ny media sosialy…
Hanao topimaso amin'ireo lahatsoratra sasantsasany navoaka sy nozarain'ireo olona ao Standing Rock sy amin'ireo izay manana fifandraisana amin'ireo olona ao ireo ity lahatsoratra etoana ity.
Nomen'ny media sosialy fitenenana ireo olona nampanginina hatry ny fotoana ela. Maro amin'ireo miaro ny zo mifandraika amin'ny rano sy ny fiarovana ny tanin'ny teratany ireo no mahantra. Ao amin'ity filma fohy nivoaka tao amin'ny BBC ity i Juliana Brown Eyes no manazava:
Monina ambanivohitra izahay. Monina amin'ny faritra mahantra izahay. Talohan'ny fisian'ny media sosialy izahay tsy mbola nanana hery — fantatrao — eto amin'izao tontolo izao tahaka izao.
Nizara ny sary eto ambany tao amin'ny Instagram izy. Tonga tao Standing Rock izy hanohitra ny Dakota Access Pipeline. Nandoko ny tanany ho manga ho mariky ny rano izy. .
Nosamborina ny mpikambana ao amin'ny foko Oglala Lakota Scotti Clifford sy i Juliana Brown Eyes-Clifford avy ao amin'ny vondrona Scatter Their Own noho ny nanaovany fihetsiketsehana ho fanoherany ny Dakota Access Pipeline. Naneho fihetsika fanehoam-piraisankina tamin'ireo fianakaviany ao amin'ny Standing Rock izy ireo hiarovana ny rano misy hasina ! Afa-mandray anjara amin'ny Tahiry Fiarovana ara-Pitsarana ny Tobin'ny Fanahin'ny Vato Masina ianareo ao amin'ny https://fundrazr.com/d19fAf.
Aleveno ny foko…
Ao amin'ny Instagram i schwifty.squanch no namoaka sary fampitahana ny ady tao Wounded Knee tamin'ny taona 1890 sy ny toe-draharaha ao Standing Rock amin'ny taona 2016. Farafahakeliny Sioux Lakotas 150 no naripaky ny miaramila amerikana an-tsoavaly tamin'ny taona 1890.
Tokony naorina avaratr'i Bismarck ny fantsona, saingy nofoanana izany satria “mety hampidi-doza” ny tanàna. Ka inona ny fanapahan-kevitr'izy ireo? Ny hampandalo azy avaratry ny vazimba teratany. Fa fahadalàna izany fa mampidi-doza ny tanàna ilay izy fa tsy vondrom-piarahamonina kely? Nahoana ? Tsy misy dikany izahay ?
Ao amin'ny Facebook, nanao fehinteny ny tolona amin'ny teny tsotra i Anthony Roberts mpanoratra : “Ny fahefan'ny fitiavana sy ny fitiavana fahefana”.
Mety hisy ve ny vahaolana?
Nampangain'ny mpitarika ny cheyennes sy ny sioux ny nanaovana azy ireo tao amin'ny biraon'ny sherifan'ny fiadidian'i Morton, polisin'ny faritra.
Nanambara toy izao i Dave Archambault II, sefon'ny foko Sioux ao Standing Rock :
Nosamborina izahay satria niditra an-tsokosoko tamin'ny taninay […] Fanohanana ihany no mba anananay. Firaisankina ihany no mba anananay. Ny vavakay ihany no anananay. Ary matanjaka izany. Mbola manambintana ihany izahay.
Namoaka ny lazaina ho “marika mampahery” i Wes Enzinna, talen-dahatsoratry ny Mother Jones : fivoriana niarahan'ny sherifan'ny fiadidian'i Morton sy ny olobe ara-poko.
Marika mampahery : nihaona teo an-tetezan'ny lalana 1806 ny sherifan'ny fiadidian'i Morton sy ny olobe ara-poko.
Taorian'ny fandravan'ny vondrona misahana ny rotaka ny toby, namoaka tononkalo nosoratany tao amin'ny Facebook ilay mpihira Kelli Love:
Miteny amin'ny fonao miady aho,
Indraindray tsy mora ny mahita fangorahana sy fitiavana eo anoloan'ny herisetra.
Mivavaka ho an'ireo olona manao fanamiana nefa miady amin'ny anadahiko sy ny rahavaviko ry zareo…
Ka mivavaka aho hisian'ny fifohazana lehibe
hahatrarany ny olona tsirairay eto an-tany.
Sady lava no sarotra ity tantara ity : efa taranaka maromaro izao no nanao ny tolona hiarovana ny rano sy ny tanin'ny vazimba teratany. Ahitana tantaram-paharavan'ny tontolo iainana sy hala-tany efa nisy talohan'i Standing Rock amin'izao taona 2016 izao. Tantaran'ady, sy famonoana sy fifanarahana nohajaina sy notapahina.
Ampifandrafiany ny zo hanan-kolontsaina sy ny fanasana atidoha ara-kolontsaina. Tafiditra ao ny fahafenoan'ny fianakaviana sy vahoaka teratany. Ireo olona rehetra ireo, sy zavatra haf amaro ihany koa, no mifaningotra ao Standing Rock amin'izao fotoana izao.
Raha tianao ny hahalala bebe kokoa momba ity tolona ity, dia jereo ireto rohy amin'ny teny anglisy ireto :
Aza misalasala manampy eo amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity [na amin'ny teny anglisy] raha misy rohy hafa hitanao.